युनाइटेड इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ९ मङ्सिर २०७५)
चालू आव २०७५/७६ को पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. १ करोड ११ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २४ प्रतिशतले कमी आएको हो । कम्पनीले गत आवको सोही अवधिमा रू. १ करोड ४७ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको आम्दानी घटेकाले नाफा घटेको हो ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३० करोड २४ लाख रहेको छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ३ करोड ५३ लाख छुट्याएको छ । यो रकम गत आवको सोही अवधिमा रू. ६ करोड ९४ लाख ऋणात्मक थियो । बीमा कोषमा रू. २९ करोड ९० लाख जम्मा भएको छ । यो रकम गत आवको तुलनामा ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
2018-11-25 - 148 view(s) - abhiyan